सजिलो तरिकामा सान्दर्भिक ब्याकलिङ्क कसरी प्राप्त गर्ने?
तपाईंले वेबसाइट अनुकूलनको लागि लिङ्क भवनको महत्त्वको बारेमा हाम्रो अघिल्लो लेखबाट सुन्नु भएको हुन सक्छ. एसईओ को लागि ब्याकलिंकहरु लाई विभिन्न कारकहरु को संख्या मा महत्वपूर्ण छ - उनि खोज परिणाम पेज मा वेबसाइट दृश्यता मा सुधार; उनी Google को आँखामा वेबसाइट प्राधिकरण बढाउँछन्; तिनीहरू वेबसाइटमा निरन्तर ट्राफिक प्रवाह सिर्जना गर्छन्, र डोमेन प्रतिष्ठा बढाउनुहोस्. त्यसकारण, यदि तपाइँ आफ्नो खोज इञ्जिन ट्राफिकलाई अधिकतम गर्नको लागि एक कडा लिङ्क प्रोफाइल सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई राम्रो ब्याकलिङ्क रणनीति चाहिन्छ जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ।.
आउनुहोस् हामीलाई अनुकूलन प्रक्रियामा ब्याकलिङ्कहरूको भूमिकाको बारेमा केही शब्दहरू दिनुहोस्।. ब्याकलिङ्कहरू साधारण अवधारणा हुन् - जब तपाईले केहि डोमेन लिङ्कहरू, त्यो बाह्य लिङ्कलाई फिर्ता लिङ्कको रूपमा मानिन्छ. लिङ्क इङ्गल्याण्डमा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्रोत लिङ्कको गुणस्तर खेलिन्छ जहाँ लिंक आउँदैछ. खोज इन्जिनले विशेष मानदण्डको संख्यामा ब्याकलिङ्कको गुणस्तरको मूल्यांकन गर्छ जुन डोमेनको प्राधिकारी, बाह्य लिङ्कहरूको संख्या र गुणस्तर समावेश गर्दछ जुन यो डोमेनमा सम्बन्धित छ, सम्बन्धित एक वेब स्रोतको सामग्री, र त्यसमा. यदि यी सबै मापदण्डहरू सकारात्मक परिणाम देखाउँछन् भने, वेब स्रोतले उच्च श्रेणी प्राप्त गर्नेछ.
प्रत्येक ब्याकलिङ्कले एक निश्चित बजार आला मा यसको प्रतिष्ठा, इतिहास, र प्राधिकरणको आधारमा लिंक रस को निश्चित मात्रा प्रदान गर्दछ।. तदनुसार, उच्च गुणस्तर PR9वा 10 वेब स्रोतहरूबाट ब्याकलिङ्कहरू स्प्यामी सहबद्ध वेबसाइटहरूबाट कम-गुणस्तरको ब्याकलिङ्कहरू भन्दा अधिक कुशल छन् जुन प्रयोगकर्ताहरूको लागि कुनै मान छैन.
सबैले भन्यो भने, यदि तपाईं Google खोज नतिजा पृष्ठमा रैंक गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई उच्च पीआर वेबसाइटहरूबाट प्रासंगिक र गुणस्तर ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न आवश्यक छ।.
यस आलेखमा हामी कसरी सजिलै गुणवत्ताको लिंकहरू प्राप्त गर्न थुप्रै तरिकाहरू छलफल गर्नेछौं. आशा छ कि यी प्रविधिहरूले तपाईंलाई लक्षित लक्ष्य सर्तहरूको लागि आफ्नो साइट रेट गर्न मद्दत गर्नेछ. त्यसोभए, हामीलाई यी लिंक इमारत प्रविधिको नजिकको नजिक छ.
(1 9) तपाईंको साइटमा ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सजिलो तरिका
गुणस्तर प्रशंसापत्र लेखेर, तपाइँले प्राधिकृत साइटहरूबाट सम्बन्धित ब्याकलिंकको साथ तपाईंको ब्याकलिङ्क प्रोफाइललाई समृद्धि गर्ने अवसर. जब तपाइँ आफ्नो क्रेडिटको मूल्यमा केहि उत्पादनहरू वा सेवाहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ विक्रेता साइटमा प्रशंसक छोड्न सक्नुहुनेछ. प्रशंसापत्र सामान्यतया तपाईंको भित्रको साइटको लिंक हुनेछ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि कि प्रमाणपत्र रचनात्मक रूपमा सिर्जना गरिन्छ. यसले तपाईंलाई कुनै पनि प्रतिशत खर्च नगरी तपाईंको साइटमा सजिलो ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ. यदि तिनीहरूले तपाईंको प्रशंसापत्रको कुनै नोभल लिङ्क राख्दछन् भने, तपाइँ तिनीहरूलाई दयालु गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ लिंकमा यसलाई बदल्न सोध्न सक्नुहुन्छ।.
तपाई वेबमा धेरै आरएसएस डाइरेक्टरी पाउन सक्नुहुनेछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न ब्लग, फोरम, वा वेब स्रोतहरू अन्वेषण गर्न दिनुहोस्।. यो कुनै पनि वेबसाइटको लागि एक उपयुक्त अवसर हो कि यी कुनै एक सम्बन्धित डाइरेक्टरीबाट नि: शुल्क dofollow ब्याकलिंक प्राप्त गर्न. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुराहरू तपाईंको RSS फिड इन डाइरेक्टरीहरूमा प्रस्तुत गर्न हो. तपाईं म्यानुअल रूपमा वा स्वचालित रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाइँ यसलाई स्वचालित रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ एक प्रोग्राम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन फास्ट RSS आरएसएस सबमिटर भनिन्छ. यस प्रोग्रामले तपाईले तपाइँको डोमेनलाई 100 भन्दा धेरै आरएसएस डाइरेक्टरीमा स्वचालित रूपमा प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्दछ, धेरै समय र प्रयासहरू बचत गर्दछ Source .